Football Khabar » जाभीको सपना– मेस्सी र नेइमारको प्रशिक्षक बन्ने !
जाभीको सपना– मेस्सी र नेइमारको प्रशिक्षक बन्ने !
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनामा कुनै बेला हालका कप्तान लिओनल मेस्सी, पूर्वकप्तान जाभी हर्नान्डेज र नेइमार सहकर्मी थिए । सन् २०१३ मा नेइमार बार्सिलोनामा अनुबन्ध भएपछि यी तीन खेलाडीले दुई सिजन सँगै खेले । जति खेले जमेर खेले । क्लबलाई एकै सिजनमा ट्रिबेल उपाधि पनि जिताए ।
तर, सन् २०१५ मा जाभी बार्सिलोना छाडेर कतारी क्लब अल सदामा अनुबन्ध भए भने नेइमार २०१७ मा बार्सिलोना छाडेर फ्रेन्च क्लब पिएसजीमा पुगे । मेस्सी भने अझै पनि बार्सिलोनामा कप्तानी भूमिकामा सक्रिय रहेका छन् । उता, जाभी अल सदामा खेलाडी हुँदै अहिले प्रमुख प्रशिक्षक छन् । यी तीन खलाडी बार्सिलोनामा रहँदा व्यक्तिगत सम्बन्ध जति सुमधुर थियो, मैदानमा पनि शानदार तालमेल थियो । उनीहरूबीच अहिले पनि निकै राम्रो समबन्ध छ ।
हालै एक अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै जाभीले नेइमार निकट भविष्यमा बार्सिलोना फर्किएको आफूले हेर्न चाहेको मात्रै बताएका छैनन्, नेइमार र मेस्सीजस्ता खेलाडीलाई बार्सिलोनामा प्रशिक्षण दिने आफ्नो सपना रहेको पनि बताएका छन् । आफूले सो अवसर पाउनेमा आशावादी रहेको जाभीले बताए ।
‘नेइमार बार्सिलोनामा फर्किउन् भन्ने म चाहन्छु । किनभने, उनका लागि बार्सिलोना र बार्सिलोनाका लागि उनी सुहाउने खेलाडी हुन् । यदि उनी बार्सिलोना फर्किए भने उनी र मेस्सी फेरि एक हुनेछन्, यो टिमका लागि मात्रै नभएर फ्यानहरूका लागि पनि खुसी कुरा हुनेछ,’ जाभीले भने ।
मेस्सी र नेइमारजस्ता उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने हरेक प्रशिक्षकको सपना रहेको बताउँदै जाभीले आफूसँग पनि त्यो सपना रहेको बताए । ‘मेस्सी र नेइमारजस्ता उत्कृष्ट खेलाडीको प्रशिक्षक बन्ने सपना हरेक प्रशिक्षकको हुन्छ, जुन मसँग पनि छ । हिजो हामी सहकर्मी थियौं । तर, भविष्यमा म उनीहरूसँग फरक भूमिकामा फेरि काम गर्न चाहन्छु । मलाई आशा छ, त्यो समय आउनेछ,’ इन्स्टाग्राम लाइभमा कुरा गर्दै जाभीले भने, ‘ढिलो–चाँडो म बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बन्नेछु ।’
प्रकाशित मिति २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०८:४९